IMacBook eWWDC, kwivenkile yeApple iMilan, iiAirPod eFrance nangaphezulu. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
IMacBook eWWDC, kwivenkile yeApple eMilan, kwiiAirPod eFrance nangaphezulu. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UJordi Gimenez | | iapile, Iikhompyuter zeMac
Le veki ibinomdla kwilizwe le-Mac kwaye uMark Gurman ngokwakhe utyhile ibhokisi yendudumo ngoLwesibini odlulileyo xa wayelumkisa kwinqaku laseBloomberg ukuba abo baseCupertino balungiselela ukuboniswa iiMacBooks ezintsha zikaJuni 5 olandelayo. Kweli nqaku akazange azilinganisele ekuthetheni iiMacBooks ezintsha, kodwa ukhankanya lonke uluhlu lweMacBook kubandakanya noMoya, into esiyibona njengesiqhelo esingaqhelekanga nguApple kodwa esingayikhuphi ngaphandle. Ngamafutshane, zimbini iiveki kunye nosuku olu-2 ukusukela kule Cawa ukuba iApple isikhusele kumathandabuzo kwi-Keynote, ngelixa siqhubeka neendaba eziphambili zeveki.
Okokuqala sishiya ikhonkco apho Kukho intetho yezi MacBook ezinokuthi ziboniswe yiApple. Ngokucacileyo ayisiyonto esemthethweni kwaye U-Apple akakhange azise naziphi na izixhobo zeWWDC ixesha elide, kodwa ukuba sinetyala apho ayenze khona kwaye kulo nyaka ungomnye, siza kubona ukuba kwenzeka ntoni.
Inkqubo ye- Ivenkile entsha yeApple eMilan ngu-Apple. Ngeli xesha ivenkile entsha iza kuba embindini wesixeko kwaye iya kuba yenye yevenkile zangoku ezisasazwa yiApple kwihlabathi liphela, imihla yokuvulwa ayicacanga kodwa sele iyasetyenzwa.
Abo bavela eCupertino ujonge umphathi weenkqubo Ukwalathisa usasazo koko acinga ukuba kuya kuba ziinkqubo zakhe. UApple unomdla wokuqesha umphathi weenkqubo ukwalathisa nokulungelelanisa imveliso yayo kwitshaneli yexesha elizayo.
NgoLwesine odlulileyo sabona intshukumo enomdla malunga nokumiliselwa kwee-AirPods kwaye ngesixhobo sewebhu seStocknow sabona Ukufika okukhulu kwezi headphone kwiivenkile zaseFrance zaseApple. Iiyure kamva kusekho isitokhwe kodwa ukuya kwinqanaba elincinci, Ngaba iApple iya kusombulula iingxaki zemveliso?
Okokugqibela sithi ndlela-ntle nge isifundo esincinci for khubaza ii-plugins ze-Safari kunye iifoto zangaphakathi del I-Apple Park ityhilwe kule veki kwinqaku elikhulu elivela kwi-Wired. Ngoku ukonwabela intsalela yangeCawa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » IMacBook eWWDC, kwivenkile yeApple eMilan, kwiiAirPod eFrance nangaphezulu. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
UMicrosoft uyila kwakhona i-OneNote yeMac
Thenga iglasi yokutshintsha iMac yam endala